12pax charming sestriere (G1) - I-Airbnb
12pax charming sestriere (G1)
Sestriere, Piedmont, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Carlo
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Carlo izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elibukekayo (amamitha-skwele angu-100) esakhiweni esisha esihle ngesitayela sentaba esise-Sestriere Borgata... amamitha angu-50 nje ukusuka emathafeni adumile okushushuluza eqhweni kuma-Olympic ka-2006!
Indawo yokuhlala emazingeni amabili, exhunywe ngezitebhisi zangaphakathi, inekamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili owodwa (imibhede engu-2) nelinye ikamelo lokulala elinombhede olala umuntu oyedwa ongu-2 + umbhede olala umuntu oyedwa (imibhede engu-4), ikamelo lokuphumula elinombhede olala abantu ababili (imibhede engu-2) negumbi lokugezela; esitezi esiphezulu kunekhishi, elinye ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili (imibhede engu-2), ikamelo lokuphumula elinombhede olala abantu ababili (imibhede engu-2), igumbi lokugezela lesibili. Ingqikithi yemibhede engu-12. Ikhishi elinakho konke elinomshini wokugeza izitsha, uhhavini, ifriji, i-freezer. I-inthanethi ye-Wi-Fi iyatholakala ngesicelo, ubuningi obungu-20 GB (izindleko ezengeziwe).
I-Borgata inezici ezijwayelekile zedolobhana elihle lasezintabeni, lingene ngokuthula nokuzola ngamamitha angaba ngu-1800 ngaphezu kolwandle. I-Borgata iyingxenye yendawo ye- "LA VIA Lattea" enikeza imithambeka engu-147 kanye nama-lift angu-72 okushushuluza eqhweni, izikole ezingu-14 ze-ski/snowboard, abafundisi be-ski abangu-800. Imithambeka yokushushuluza eqhweni nama-lift okushushuluza eqhweni ikude ngemizuzu engu-5. Idolobha lase-Sestriere Colle lingamaminithi angu-5 nje ngemoto futhi lingafinyelelwa kalula ngebhasi noma ngetekisi yangasese.
Izivakashi zizokwazi ukusebenzisa noma yiluphi usizo ngaso leso sikhathi.